The Kpop Times Media - ၁၉၉၃ ခုနှစ်ဖွား အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်မင်းသားများ
၁၉၉၃ ခုနှစ်ဖွား အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်မင်းသားများ
သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ သရုပ်ဆောင် စွမ်းရည်တွေက အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ သရုပ်ဆောင် စွမ်းရည်တွေက အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။
အချိန်ကောင်းတစ်ခုကိုရောက်လာရင် သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်အလုပ်မှာ အဓိကဇာတ်ကောင်နေရာကနေ ပါဝင်လာနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်က သူအောင်မြင်ခဲ့တာဟာ အရေးအပါဆုံးဒီအချက်နှစ်ချက်ကို ရယူဖို့ဆိုရင်တော့ အောင်မြင်မှုလမ်းစဟာ သိသိသာသာ နိမ့်ဆင်းလာမှာပါ။
တောင်ကိုရီးယား ပြည်သူတစ်ချို့မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကို ကောင်းမြတ်တဲ့နှစ် လို့ရည်ညွှန်းခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်မှာ လက်ရှိ ရုပ်ရည်ချောမောရုံတင်မက သရုပ်ဆောင်အရည်အချင်းတွေပါ ရှိတဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ မွေးဖွားလာခဲ့တာကြောင့်ပါ။
သူတို့ဟာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ တစ်ခြားသူတွေ အိပ်မက်သာမက်နိုင်တဲ့ အားကျလောက်စရာ အောင်မြင်မှုတွေကို ပြသနိုင်ခဲ့ပြီး သရုပ်ဆောင်အလုပ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အသက် ၂၆ နှစ် လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒီသရုပ်ဆောင်တွေ နဲ့ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ရှာကြည့်လိုက်ရအောင် !
Lee Hyun Woo ဟာ ၁၉၉၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာ စစ်မှုထမ်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။
Lee Hyun Woo ဟာ အသက်၁၁နှစ်မှာ KBS ရဲ့ဒရာမာတစ်ခုနဲ့အတူ ကလေးသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပွဲဦးထွက်ခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ မှာ စစ်မှုထမ်းမသွားခင် ၁၀ စုနှစ်တစ်ခုကျော်အထိ ပရိသတ်တွေဆီက အများအပြား အချစ်ခံခဲ့ရသူပါ။
Lee Hyun Woo ဟာ "Secretly Greatly" နဲ့ "Northern Limit Line" ရုပ်ရှင်တွေ ၊ KBS ရဲ့ "Master of Study" နဲ့ tvN ရဲ့ "The liar and his lover" ဒရာမာတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ရင်းနဲ့လည်း ရရှိလာတဲ့ အခွင့်အရေးအားလုံးကို မတူညီတဲ့ ရုပ်ရှင် ၊ ဒရာမာ အမျိုးအစားတွေကို လေ့လာဖို့ အသုံးချခဲ့ပါတယ်။
Seo Kang-jun ကို TV မှာ ပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန် ရုတ်တရက် နှလုံးခုန်နှုန်းတွေမြန်လာတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
သူဟာ JTBC ရဲ့ ဒရာမာ "The Third Charm" မှာ အဓိကဇာတ်ဆောင်အနေနဲ့ ပါဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ သတင်းတွေကြားပြီးနောက် အိပ်မက်တစ်ခုလိုပဲ Seo Kang-jun ကို TV မှာ ၈ ပတ်လောက် ဆက်တိုက်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေက ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ Seo Kang-jun ဟာ "In-ho" အနေနဲ့ tvN ရဲ့ဒရာမာ "cheese in the trap" မှာ ၊ "Young-bin" အနေနဲ့ "Entourage" မှာလည်း အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရုံသာမက ပရိသတ်တွေလည်း ပိုတိုးလာခဲ့ပါတယ်။
Yoo Seung Ho ဟာ ၁၉၉၃ ဩဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး လတ်တလောမှာ SBS ရဲ့ ဒရာမာ "My Strange Hero" မှာပါဝင်ထားမှုနှင့်အတူ ပိုပြီးကျော်ကြားနေပါတယ်။
Yoo Seung Ho ဟာ ၂၀၀၀ခုနှစ်မှာ ဒရာမာတစ်ခုနဲ့အတူ ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ခုနှစ် စစ်မှုထမ်းမသွားခင်ထိ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အောင်မြင်လာအောင် ဆက်တိုက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
Yoo Seung Ho ဟာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်လာရုံတင်မက ကလေးသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း အခြား ကလေးသရုပ်ဆောင်တွေအတွက် အတုယူစရာလူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး Park Bo Gum ဟာ လက်ရှိ tvN ရဲ့"Encounter" ဒရာမာမှာ Song Hye Kyo နဲ့အတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Park Bo Gum ဟာ ၂၀၁၁ခုနှစ်က "Blind" ရုပ်ရှင်မှာ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပွဲဦးထွက်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ဟာ၂၀၀၀ခုနှစ်က ကလေးသရုပ်ဆောင် Lee Hyun Woo ကို ပြန်အမှတ်ရသွားစေတဲ့အတွက် ပွဲဦးမထွက်ခင်ကတည်းက ပရိသတ်တော်တော်များများရရှိထားသူပါ။
Park Bo Gum ဟာ tvNရဲ့ "reply1988" နဲ့ KBSရဲ့ "Love in the Moonlight" ဒရာမာတွေမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပြီး JTBC ရဲ့ "Hyori's Homestay" reality show မှာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
5. EXO ရဲ့ D.O.
(Do Kyung-soo) D.O. ဟာ ပရိသတ်ပေါင်းများစွာ ရရှိထားတဲ့ K-Pop အဆိုတော်အဖွဲ့ EXO ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာမွေးတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ D.O. ဟာ SBS ရဲ့ "It's Okay, That's Love" ဒရာမာမှာ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး ဘဝစာမျက်နှာသစ်တစ်ခု ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဒရာမာနှင့်အတူ အောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုကို ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် D.O.ဟာ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့တာဟာ သူ့ရဲ့ လှပလွန်းတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ အံ့ဩလောက်စရာအသံကို ကျေးဇူးတင်ရမလိုပါပဲ။
အခုချိန်မှာ D.O. ဟာ အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်လာတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
More in Others Section « တစ်ချိန်မှာ CEO တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အားကျဖွယ် အရည်အချင်းများ ကံနိမ့်ခဲ့လို့ ဆိုးဆိုးရွားရွားစွပ်စွဲမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အပြစ်ကင်းသူ Idol များ »